Ny lahatsoratr'i AJ Kieffer momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i AJ Kieffer
AJ dia Senior Manager an'ny Product Marketing ao amin'ny mpitarika. Famindrana avy amin'ny tontolon'ny maso ivoho dokam-barotra, AJ dia tetikady am-pahaizana momba ny varotra za-draharaha maniry hamoha sy hampandeha ny hevitry ny mpanjifa.
Mpitondra andraikitra: Sehatra varotra biolojika ho an'ny orinasa MarTech Stack anao
Talata, Febroary 18, 2020 Talata, Febroary 18, 2020 AJ Kieffer
Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalana diso tafahoatra isika. Miaraka amin'ny onjam-peo tsy miova ankehitriny, na dia ny mpivarotra nomerika mahay indrindra aza dia mety hahatsapa ho tototra. Tsy mila ny valin'ny fanontaniana rehetra ianao fa mila fanalahidy hamaha ny lanjan'ireo fampielezankevitra sy programa nataonao fotsiny. Mila serivisy manokana sy azo idirana ary mahomby ianao. Ny fampidirana fomba vaovao hizaha sy hizarana hevi-baovao sy fahafaha-manao amin'ny Conductor Searchlight Conductor dia mamoaka lozisialy vaovao ho an'ny anay